Iindaba - izitshixo zangaphandle kunye nezitshixo zangaphakathi
izitshixo zangaphandle kunye nezitshixo zangaphakathi
Sonke siyazi ukuba amaqhosha emoto adlala indima ebalulekileyo xa imoto ifuna ukubaleka endleleni. Ke ngoko, isitshixo semoto sibaluleke kakhulu emotweni. Logama umhlobo onemoto kusapho enesitshixo semoto, nokuba uyimoto yombane, imoto okanye ibhayisekile, zininzi iintlobo zezitshixo esizibonayo, uhlobo ngalunye lwesitshixo Bonke baneempawu zabo, kwaye iindlela noomatshini esiya kubo kwivenkile yokutshixa bahlukile. Ke yintoni umahluko phakathi kwabo? Masiqale ngenkqubo yokufaka ipleyiti yokutshixa (ukuba kukho umgaqo wokutshixwa kwemoto ukuba awuqondi, ndincoma ukuba ufunde eli nqaku lilandelayo: Ulwahlulo lokutshixa kwezitshixo zemoto). Siyazi ukuba izitshixo eziveliswa ngamaqhaga ahlukeneyo zenza izitshixo zibe neentlobo ezintathu: ukugaya okuthe tyaba, ukugaya kwangaphandle, kunye nokugaya kwangaphakathi. Ezi ntlobo zintathu zenziwe ngokudityaniswa kwendalo kwesiqwenga sokutshixa. Ngaphambi koku, ndiza kuyazisa into wonke umntu, oko kukuthi, eyona track, yeyiphi eyona track iphambili, ibhekisa kwindibaniselwano yendawo yokusebenza yesitshixo esifakwe kwisilinda esitshixwayo.
Ukuhlelwa kwesitshixo kwemoto
Okokuqala: Flat Milling single track
Isitshixo sokugaya isitshixo esinye sethrekhi sibhekisa kwisitshixo sokugaya isicaba esisebenza ngomkhondo omnye. (I-PS: Ukuba zimbini iingoma kwiqhosha kodwa ukuba isebenza itrack enye, ibizwa ngokuba yi-flat milling single track) Ngokubanzi, izitshixo zeemoto zombane ezincinci, iikhabhathi zedrowa, kunye nezitshixo zekhabhathi zetsimbi zilolu hlobo lwezitshixo, ngolu hlobo lulandelayo Umfanekiso ubonakalisa:
Ukuhlelwa kwesitshixo semoto, imifanekiso yokuhlelwa kwemoto
Okwesibini: ukuguqa kweetafile ezimbini
I-track-mbini iqhosha lokusila tyaba libhekisela iqhosha lokugaya tyaba apho omabini la matshini weqhosha lokusila tyaba asebenza ngaxeshanye. Ngokubanzi, olu hlobo lwamaqhosha aphambili afumaneka ikakhulu kwizithuthuthu, iiveni, iilori, iilori, iBuick Excelle, iKia K2, iToyota Vios, iimoto ezininzi zaseNissan, kwaye uninzi lweemoto zasekhaya ezingaphantsi kwe-100,000 yuan lulolu hlobo lwamaqhosha. , Njengoko kubonisiwe ngezantsi:
Okwesithathu: ukugaya ngaphakathi iingoma ezimbini
Uguquko lwangaphakathi lwee-track ezimbini eziphambili luthetha ukuba iindlela ezimbini zokugaya isitshixo sangaphakathi ziyasebenza, kwaye ezinye iindlela zokuhamba azisebenzi. Ngokubanzi, olu hlobo lwesitshixo lusetyenziswa kwiimoto ezincinci zombane, iisilinda ze-C-level zokutshixa ubusela, kwaye uninzi lwevolkswagen, Audi, kunye neBMW izitshixo zezitshixo zolu hlobo lwesitshixo. Umfanekiso othile uboniswa kulo mzobo ulandelayo:
Okwesine: Iitrekhi ezine zokugaya zangaphakathi
Uguquko lwangaphakathi lwendlela ezine lubhekisa kwisitshixo sokugaya sangaphakathi apho kusebenza khona zonke iindlela ezine zesitshixo sokugaya sangaphakathi. Ngokubanzi, olu hlobo lweqhosha lufumaneka kakhulu kwiToyota Crown, kwaye ezinye iimoto zangoku, iLexus, njl.Nje olu luhlobo lwesitshixo, isitshixo sibonisiwe kulo mzobo ulandelayo: